विक्टोरियाको प्रसिद्ध अन्वेषक र मेक्सिमिलिले शुभ आविष्कारक यो भिडियो स्लॉटको नायक हुन् Microgaming - संसारको प्रवेश गर्नुहोस् fortunian, यो ऐतिहासिक sci-fi थीम खेल एक शहर मा आधारित एक नै नाम असर। फोर्चुनियम एक "समृद्धता र बहुतायतको प्रबल महानगरीय" हो, र विक्टोरियाको र म्याक्सिमिलीको घरको स्थान हो।
यो खेल, तपाईं आशा गर्नुहुँदा, विशेष रेस सुविधाहरूको एक टिम विशेषता जस्तै रहस्य रील्स, स्ट्याक्ड रहस्य चिन्ह र एक अचम्मको विन बूस्टर जसले यी रहस्य चिन्हहरूलाई उच्च-मान आइकनहरूमा बदल्छ। यस खेलमा सम्पत्तीको विषय अत्यन्तै स्पष्ट छ, त्यसैले यो विशाल, हलचल शहर कि फोर्चुमियममा जित्ने धेरै अवसरहरूको लागि तयार हुनुहोस्!
फोर्टुनियम खेल विशेषताहरू
5 विजेता पेनलाइनसँग 5-row सेटअप द्वारा फर्चुनिज 40-reel मा खेल्ने खेलाडी खेल्दछ, र यो भन्दा कम शर्तको खेल खेल्न सकिन्छ। 0.1 सम्म अधिकतम € 125 सम्म। हामीले भने भने, यो विक्टोरिया अन्वेषक र अधिकतम आविष्कारकको वरिपरि फोकस हुन्छ - उनीहरूको साहसिक केही धेरै रोचक बोनसले सहयोग गरेको छ, जस्तै हामी अहिले देख्न सक्छौं।
फोर्टुनियम फ्री स्पिन र बोनस
पहिलो विशेषता हामीले हामीलाई बताउनु पर्छ रहस्य प्रतीक फीचर हो, जुन ट्रिगर गरिन्छ जब रहस्य प्रतीकहरु मा जमीन र एक यादृच्छिक प्रतीक प्रकट गर्दछ। यो अनियमित प्रतीक स्क्याटर को बाहेक सबै नियमित प्रतीक हुन सक्छ, र नयाँ विजय संयोजनहरू बनाउन मद्दत गर्न सक्दछ।
रीसेटको बायाँमा तपाईँले विन बूस्टर बटन पाउनुहुनेछ। यो प्रतीक थिच्नुहोस् र कम मूल्यको सबै चिन्हहरू हटाइने एक पटक सुविधा फिचर सक्रिय भएपछि एक पटक रिसेलहरू हटाइनेछ, अर्थमा मात्र प्रीमियम र जंगलीहरू ट्रिगर हुन सक्छ। Win Booster सुविधा सक्रिय पार्नाले तपाइँको शर्तलाई 50% मा वृद्धि गर्नेछ।
जब तपाईं3लाई अधिक गर्नुहुँदा नि: शुल्क स्पिन सुविधा सक्रिय हुन्छ र रिल्समा अरु पनि स्क्याट गर्दछ, र तपाईले 10 नि: शुल्क स्पिन पाउनुहुनेछ। मोडको समयमा, प्रत्येक रिसेप्टर जुन रिलेहरूमा खरिद गर्दछ तपाईलाई अतिरिक्त निःशुल्क स्पिन प्रदान गर्दछ। न केवल त्यो, तर तीन, चार वा पाँच स्कटर प्रतीकहरूले तपाईंलाई दुई स्पिन, वा हरेक स्पिनमा तीन रहस्य रिले प्रदान गर्नेछ। यी रहस्यले मात्र प्रीमियम र जंगली समावेश गर्दछ, यसको अर्थ प्रत्येक स्पिनको साथ तपाई3पूर्ण जंगली रिल्स प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
विक्टोरिया र म्याक्सिमिली, यस स्लॉटको मुख्य क्यारेक्टरहरू रीलहरूमा स्टक गरिएका प्रतीकको रूपमा देखा पर्छन्। The सुनको ईगल एक अर्को प्रतीक हो जुन तपाईंलाई रिल्स मा मिल जाएगा, एक साथ गैजेट्स र gizmos को एक साथ, र एक संख्या को सुन-laden खजाना चिनहरू। विशेष चिन्हहरूमा स्क्याटरहरू र धेरै रहस्य चिन्हहरू पनि समावेश छन्।
यसैले, पेआउट तालिका दुई कोटिहरुमा विभाजित छ: उच्च भुक्तानी प्रतीकहरू - यिनी मध्ये पांच - र चार कम भुक्तानी प्रतीक, कार्ड सूट (दिमाग, स्पैड, क्लब र हीरा) को प्रतिनिधित्व गर्दछ। उच्चतम भुक्तानी प्रतीकहरू विक्टोरिया, मेक्सिमिली, चेस्ट, जिपपिलिन्स र एनआरएफ बन्दूकहरू छन्। विक्टोरिया र म्याक्सिमिलिले एक प्रकारको 8 को लागि 5x तपाईंको कुल शर्त रकम भुक्तान गर्न प्रतीकहरू स्टक गरिएका छन्।
जंगली प्रतीक पनि एक भारी भुगतान को लायक छ, एक payline मा एक प्रकार को पांच को लागि 20x पुरस्कार संग। स्क्याटरले हरित चश्मा क्षेत्रको रूपमा देखा पर्यो, यदि तपाईले पाँचवटा थन्को गरेपछि 100x सम्म पुग्ने भुक्तानीहरू साथ।
फोर्टुनियम ग्राफिक्स र ध्वनि
तपाईंको वरिपरिका गोठालाहरू - फोर्टुनियम उच्च स्तरको डिजाइन र सुनको रङको साथ आउँछ। सामान्य रूपमा, माइक्रोगाइमले रिलेन्सको तलको आफ्नो मानक नियन्त्रण प्यानल समावेश गर्दछ, र जब त्यहाँ रिलेहरूमा धेरै कार्यहरू छन् भने ग्राफिक्सको सामान्य सफाईबाट हटाउँदैन। फोर्ट्युमियमले राम्रो खेलिएको छैन तर धेरै राम्रो देखिन्छ।
Fortunium एक भिडियो स्लॉट एक कम माध्यम मध्यम भिन्नता संग, जहाँ जंगली को एक पूर्ण स्क्रिन को बैगिंग एक whopping 800x को बिना असंभव काम प्रकट बिना भुगतान गर्दछ। उच्च-गुणस्तर ग्राफिक्स र विस्तारमा उच्च स्तरको ध्यानको अलावा, फर्टुनियम एक साँच्चै मजा भिडियो स्लॉट हो। माइक्रोगाइम एक धेरै उच्च स्तरको खेलहरू उत्पादन गर्दछ र यस साहसिक कार्यलाई अपवाद छैन, र तपाइँले ठूलो जीतहरू स्कोर गर्न मद्दत गर्न निःशुल्क स्पिनहरू र रहस्य चिन्हहरूमा गणना गर्न सक्नुहुन्छ!
ऐलिस र रातो रानी
fortunian अपडेट गरिएको: जनवरी 14, 2019 लेखक: आमिर Berrey
2.0.0.1 मिस्रका नायकहरू
2.0.0.3 राक्षस उन्माद
2.0.0.4 रोषका पक्षी
2.0.0.5 ऐलिस र रातो रानी
2.0.0.6 आफ्नो घोडाहरू समात्नुहोस्
2.0.0.7 कैंडी सपनाहरु
2.0.0.8 इस्पातको मानिस